Doorashadii degaanka kamukunji oo la qabanayo 18ka bishan August ee aanu ku jirno.
Posted by admin on August 10 2011 19:05:12
Kenya:(HS)-Doorashadii Deegaanka Kamukunji oo la qaban doono 18ka bishan kedib markii la hakiyey bishii May ee ina dhaaftay.Ha'yadda madax banaan ee doorashooyinka dalka Kenya IIEC ay si rasmi ah ugu dhawaaqay ay doorashu dhaceyso. doorashadan oo ay raga u tartamaya ay ka mid yahiin labo muwaadin oo Somaliyeed ayaa lagu wadaa ineuu ku guuleysto Yusuf Hassan Indha-Gamuun oo ka socda xisbiga talada haya marka loo eego heerka abaabulka doorashada ee uu kula jiro raga ka soo horjeeda.+Sawiro
Kenya:-Doorashadii Deegaanka Kamukunji oo la qaban doono 18ka bishan kedib markii la hakiyey bishii May ee ina dhaaftay.Ha'yadda madax banaan ee doorashooyinka dalka Kenya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IIEC ay si rasmi ah ugu dhawaaqay ay doorashu dhaceyso. doorashadan oo ay raga u tartamaya ay ka mid yahiin labo muwaadin oo Somaliyeed ayaa lagu wadaa in uu ku guuleysto Yusuf Hassan Indha-Gamuun oo ka socda xisbiga talada haya marka loo eego heerka abaabulka doorashada ee uu kula jiro raga ka soo horjeedo.
DoorashadaDeegaanka Kamukunji oo la qabanayo 18ka bishan ayaa waxaa si rasmi ah u fasaxay Hay`ada madaxa banaan ee doorashooyinka dalka Kenya IIEC kadib markii maxkamada racfaanka dalka Kenya ay qaaday xayiraad ay hada ka hor maxkamada sare ee wadanku ku joojisay qabashada doorashada oo qorshahu ahaa in la qabto 23dii bishii May ee inadhaaftay.
Tartamayaasha kursigan oo ay ka mid yahiin laba nin oo Soomaali ah, Yusuf Hassan Indha-Gamuun iyo Ibraahim Jhony ayaa si aada usoo dhaweeyay go`aanka maxkamada racfaanka, waxaana durbaba bilowday kaambayn iyo ol-ole ay tartamayaashu ugu xusul duubayaan sidii mid waliba ku heli lahaa kalsoonida shacabka Kamukunji oo soomaalidu qayb wayn ka tahay 18ka AUG. marka laga soo tago qaabka ay doorashu u socoto hadane Yusuf Hasan ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono xilkan amaba uu noqon doono xubin ka mid ah baarlamaanka deegaanka Kamukunji oo ah degaan aad u baaxad qeyn oo ay ka mid tahay xaafada Islii ee ay Somalida ku nool magaalada Nairobi ku badan tahay.
Marka dib loo eego 30kii sano ee ugu danbeeyey Somalida Kenya ku nool waxey ka mid yahiin amaba u muuqdaan kuwo xooga saray sedax arimood oo nolosha bini,aadamka ugu muhiimsan sida Tacliinta, ganacsiga iyo siyaasada taasi oo meesha ka saartay dumarka iyo caruurta Somalida Kenya in loo dhibaateeyo sidii hore maadama ay hada meelkasta ka muuqdaan.
Musharaxa Yusuf Hasan oo dhawaanahan safaro kala kedisan ku tagay magqqloyin ku yaala waqooyiga America sida Toronto iyo Edmonton oo Canada ku yaala halka uu safar ku tagay magaalada halboowlaha u ah Somalida Mareykanka ku nool ee Minneapols. Musharaxa oo siweyn loogu soo dhaweeyey mudadii uu ku sugnaa waqooyiga America ayaa hada lagu wadaa inuu ku guuleysan doono doorashada dhaceysa ka hor inta aysan dhamaan bishani aynu ku jirno ee Ramadaanka.
Doorashadani ayaa la hakiyey markii uu ka dhashay muran badan murankaasi oo aaqirkii meesha ka saaray nin Kuukuye ah halka labada muwaadin ee Somalida ah loo ogolaaday. rajada labada muwaadin ee Somaliyeed ayaa aad u wanaagsan maadama ay meelaha laga soo dooranayo ka mid tahay xaafada Islii oo mararka qaarkeed loogu yeero Small Mogdishu. muhiimada doorashadan ayaa ah sidii uu muwaadin Somaliyeed ugu guuleysan lahaa iyadoo arintaasi lagu wado iney kaalin fiican ka qaataan oo ay iskugu soo baxaan Somalida halkaasi degan ee iyagu codeyn kara.
Mid ka mid ah labada musharaxa ee Somalida ah ayaa aad loo hadal hayaa sida warar horudhac ah inagu soo gaarayaan kaasi oo magaciisa lagu sheegay Yusuf Hasan Indha-Gamuun halka aysan walito inoo suuroobin in aanu macluumad badan ka ogaano musharaxa kale ee isaguna ah muwaadin Somaliyeed oo lagu magacaabo Ibraahim Jhony.
Inta badan doorashooyinka ka dhaca dalka Kenya Somalidu waayadaan danbe uma xuma dadweynaha ay la noolyahiin ee Kenyatiga ah, waxaana xilal kala duwan dowlada dhexe ka soo qabtay amaba hada haya muwaadiniin Somaliyeed inkastoo nin aad muhiim ugu ahaa Somalida Kenya oo lagu magaabi jiray Khalif ay diyarad kula dhacday dhulka ay Somalidu u badan tahay ee North Eastern Kenya iyadoo aad looga naxay dhimashada muwaadinkaasi Somaliyeed kana damqan jiray dhibaatada lagu hayey shacabka Somaliyeed ee ku nool wadanka Kenya iyadoo mararka qarkood loo isticmaali jiray awoodo xad dhaaf ah oo ay ciidamda dowlada Kenya kula dhaqmi jireen.
Nasiib wanaag hada xaalku wuu ka duwan yahay sidii hore oo Somalida Kenya waa dad codkooda la maqlo iyadoo ay kaalimo muhim ah kaka jiraan xisbiyada siyaasada Kenya.